Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Boeing na-ebugharị ụgbọ ibu 737-800BCF ọhụrụ
Aviation • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị!
Boeing kwuputara atụmatụ imepe ahịrị ntụgharị ụgbọ elu atọ ma binye aka na Icelease n'usoro siri ike maka 11 737-800 Boeing Converted Freighters. (Ebe E Si Nweta Foto: Boeing)
Ka ọchịchọ zuru ụwa ọnụ maka ndị na-ebu ibu na-aga n'ihu na-arị elu, Boeing [NYSE: BA] taa kwupụtara atụmatụ ịgbakwunye ahịrị ntụgharị atọ maka 737-800BCF na-eduga ahịa n'ofe North America na Europe. Ụlọ ọrụ ahụ bịanyekwara aka n'akwụkwọ nkwado siri ike na Icelease maka iri na otu n'ime ndị na-ebu ibu dị ka onye ahịa mmalite maka otu n'ime ahịrị ntụgharị ọhụrụ.
N'afọ 2022, ụlọ ọrụ ahụ ga-emepe otu ahịrị ngbanwe na Boeing's London Gatwick Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) ụlọ ọrụ, hanga ọgbara ọhụrụ ya na United Kingdom; na ahịrị ntụgharị abụọ na 2023 na KF Aerospace MRO na Kelowna, British Columbia, Canada.
Jens Steinhagen, onye isi Boeing Converted Freighters kwuru, "Iwulite netwọkụ dị iche iche na nke zuru ụwa ọnụ nke akụrụngwa ngbanwe dị oke mkpa iji kwado uto ndị ahịa anyị na imezu ọchịchọ mpaghara." "KF Aerospace na ndị otu Boeing anyị na London Gatwick nwere akụrụngwa, ikike na nka achọrọ iji nyefee ndị ahịa anyị Boeing Converted Freighters na-edu ahịa."
Gregg Evjen, onye isi ọrụ KF Aerospace kwuru, "Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị na-agbasa mmekọrịta anyị na Boeing. "Anyị na-arụ ọrụ na Boeing ngwaahịa akara ihe karịrị afọ 30. Site na ahụmịhe ntughari ibu anyị, ndị ọrụ anyị nwere oke nka yana ihe niile achọrọ ugbu a, anyị dịla njikere ịrụ ọrụ ma nyere ndị ahịa Boeing aka.”
Maka Icelease, nke gbasaa nkwado ya na Corrum Capital n'oge na-adịbeghị anya site na njikọ aka a na-akpọ Carolus Cargo Leasing, iwu maka iri na otu 737-800BCF ga-abụ usoro mbugharị ụgbọ mmiri mbụ ha na Boeing. Onye nwe ụlọ ga-abụ onye ahịa mmalite maka mgbanwe n'ụlọ ọrụ Boeing nke London Gatwick MRO.
Magnus Stephensen, onye isi otu na Icelease kwuru, "Anyị nwere obi ike na ndekọ nke Boeing 737-800 tụgharịrị, ma nwee obi ụtọ ịbụ onye ahịa mmalite maka ụlọ ọrụ MRO ọhụrụ ha na London." "Anyị na-atụ anya ibubata ndị na-ebu ibu n'ụgbọ mmiri anyị iji jeere ndị ahịa anyị na-eto eto n'ụwa niile na-arụ ọrụ ụzọ ụlọ na nke dị mkpụmkpụ."
N'afọ gara aga, Boeing kwupụtara na ọ ga-emepụta ikike ntụgharị 737-800BCF ọzọ n'ọtụtụ saịtị, gụnyere ahịrị ntụgharị nke atọ na Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO), na ahịrị ntụgharị abụọ na 2022 ya na onye na-ebubata ọhụrụ, Cooperativa Autogestionaria de Servicios. Aeroindustriales (COOPESA) na Costa Rica. Ozugbo ahịrị ọhụrụ ahụ malitere ọrụ, Boeing ga-enwe saịtị ntụgharị na North America, Eshia na Europe.
Boeing buru amụma na mgbanwe 1,720 ibu ibu ga-adị mkpa n'ime afọ 20 na-abịa iji gboo mkpa. N'ime ndị ahụ, 1,200 ga-abụ ntụgharị ahụ ọkọlọtọ, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nke ihe ahụ sitere na ndị na-ebu ndị Europe, yana 30% sitere na North America na Latin America.
737-800BCF bụ onye ndu ndị na-ebu ibu anụ ahụ nwere ihe karịrị iwu 200 na nkwa sitere n'aka ndị ahịa 19. 737-800BCF na-enye ntụkwasị obi dị elu, oriri mmanụ dị ala, ọnụ ahịa ọrụ dị ala kwa njem yana nkwado teknụzụ ọrụ ọkwa ụwa ma e jiri ya tụnyere ndị na-ebu ọkọlọtọ ahụ. Mụtakwuo maka 737-800BCF na ezinụlọ Boeing freighter zuru oke Ebe a.